Qalabka tuubada dabka
Gariiradda tuubada dabka
Waalka caga Din la stor ...
4 dariiqa marinka breeching
Mashiinka tuubada tubbada dabka
Faahfaahin: Waalka TCVN ee soo degaya waa waalka darajada 45 ee loo sameeyay si waafaqsan heerarka TCVN. Labada cabbirka soo gelida iyo cabbirka intaba waa xargaha BSP. Qiyaasaha ugu waaweyn waa 50mm, 65mm, iwm. Qalabka waalka iyo qalabku wuxuu ka samaysan yahay naxaas, kaas oo si wax ku ool ah u hagaajiya caabbinta cadaadiska ee alaabta. Gawaarida soo degta TCVN waa qeyb ka mid ah nidaamka dabka la dagaallama, shaqadiisuna waa inay bixiso ilo biyo ah oo loogu talagalay ka hortagga dabka. Cadaadiska shaqo ee biyo-mareenka dabka guud ahaan waa 16bar, iyo ...
Sharaxaad: Duufaanta Tubada Dab-damiska waxaa loo qaabeeyey oo la soo saaray oo loo hoggaansamay BS EN 671-1: 2012 oo leh tuubbo adag oo u dhiganta heerarka BS EN 694: 2014. Mashiinka tuubbada dabku waxay siisaa xarun ka hortagga dabka biyo joogto ah oo la heli karo isla markiiba. Dhisida iyo waxqabadka tuubada tuubada dabka oo leh tuubbo nus-adag ah waxay hubineysaa rakibidda habboon ee dhismayaasha iyo shaqooyinka kale ee dhismaha ee ay u adeegsadaan dadka deggan. Qalabka dabka ee dabka ayaa loo isticmaali karaa iyada oo aan lagu beddelin wax soo saarka wi ...
Sharaxaad: Gawaarida Gawaarida waxaa lagu rakibay banaanka dhismaha ama meel kasta oo si fudud looga gali karo oo ku yaal dhismaha ujeeddooyin dab-damis ah shaqaalaha dab-demiska si ay u galaan marinka. Meelaha la soo gaabiyo waxay kuxiran yihiin iskuxirka marinka ee heerka helitaanka guutada dabka iyo iskuxirka marinka meelaha la cayimay. Caadi ahaan way qalalan tahay laakiin waxaa lagu soo dallaci karaa biyo iyadoo laga soo tuurayo qalabka adeegga dabka. Markuu dab kaco, matoorka biyaha ee gaariga dab-damiska si dhaqso leh ayuu ugu xirnaan karaa ...
Din waalka soo degida leh adaz adapter oo leh dabool
Sharaxaad hyd DIN dabka shidaalka waa waalka darajada 45 ee loo sameeyay si waafaqsan heerarka Jarmalka. Labada cabbirka soo gelida iyo cabbirka intaba waa xargaha BSP. Qiyaasaha ugu waaweyn waa 25mm, 40mm, 50mm, 65mm, iwm. Qalabka waalka iyo qalabku wuxuu ka samaysan yahay naxaas, kaas oo si wax ku ool ah u hagaajiya caabbinta cadaadiska ee alaabta. DIN dabka waa qayb ka mid ah nidaamka dabka, shaqadiisuna waa inay siiso ilo biyo ah oo loogu talagalay dabka. Cadaadiska shaqada ee dabka dabka guud ahaan waa gudaha ...
Sharaxaad assembly Isku-xidhka tuubada tuubadu waxay ku taalaa gudaha dhismayaasha qiiqa qoyaanka ama qallalan.Waxay ka kooban tahay meel ay ku laalaadaan tuubada dabka (30m) iyo isku xidhka, sanka, faashadda tuubada xagasha midig, ibta naaska. waxay u oggolaanaysaa biyaha inay maraan tuubbada ka dib marka laga saaro tuubbada iyo sanka. Rakaabka waxaa lagu heli karaa cabirkiisu yahay 1.5 "iyo 2.5" .Waxaa jira laba hab oo lagu dhejiyo tuubada tuubbada. Mid waa iyadoo la adeegsanayo xarig darbi midka kalena waa ku hagaajinta xagal qumman ...
Faahfaahin Noocyada dabka waxaa badanaa laga sameeyaa dahaadh naxaas ah. Waxyaabaha qaarkood waxaa laga sameeyaa waxyaabo caag ah iyo naylo. Guud ahaan waxaa loo isticmaalaa in lagu xiro dabka dabka si loogu ciyaaro doorka biyo kuleylka. Biiyaha ayaa leh laba shaqo: Jet iyo buufinta. Markaad isticmaaleyso, kaliya u rog madaxa biiyaha sida loogu baahan yahay. Muhiimka ah Specificatoins:: Waxyaabaha: Brass iyo plactic ● Cabirka: 19mm / 25mm ● Cadaadis shaqeynaya: 6-10bar pressure Cadaadiska tijaabada: 12bar and Soo saaraha oo shahaado ka haysta BSI Talaabooyinka Waxqabadka: Sawirka-Caaryada –Sawirada Sawirka -Assem ...
Cadaadiska yareynta waalka E nooca
Faahfaahin: Nooca E cadaadiska yareynta cadaadiska waa nooc ka mid ah cadaadiska xakameynaya waalka biyaha. Falkeliyayaashan waxaa lagu heli karaa marinka flanged ama galdaloolo waxaana lagu soo saaray inay u hogaansamaan heerka BS 5041 Qaybta 1 oo leh isku xirka tuubada gudbinta iyo daboolka maran ee u hogaansamaya heerka BS 336: 2010. Farsamooyinka soo degaya waxaa lagu kala saaraa cadaadis hoose waxayna ku habboon yihiin in loo isticmaalo cadaadiska soo-galista magac-ahaanta illaa 20 baararka. Dhameystirka gudaha ee waalka kasta waa mid tayo sare leh oo hubinaya socodka hooseeya ...
Biiyaha buufiyo Jet la waalka gacanta
DESCRIPTION: Mashiinka lagu buufiyo Jet ee korontada lagu xakameeyo waa biiyaha nooca gacanta lagu sameeyo. Qalabka noocan ah waxaa lagu heli karaa aluminium ama Caag waxaana loo soo saaray inay u hoggaansamaan heerka BS 5041 Qaybta 1 oo leh isku xirka tuubbada u hoggaansamaysa heerka BS 336: 2010. Qalabka nozzles waxaa lagu kala saaraa cadaadis hooseeya waxayna ku habboon yihiin in loo isticmaalo cadaadiska soo-galista magac ahaanta illaa 16 baararka. Dhameystirka dahaarka gudaha ee biiyaha kasta waa mid tayo sare leh oo xaddidaya xaddidaadda socodka hooseeya ee buuxisa heerka socodka biyaha ...
Kabadhka shaashadda tubbada dabka
Sharaxaadda Kabadhka ciribtirka tuubbada dabka wuxuu ka sameysan yahay bir fudud oo inta badan waxaa lagu dhejiyaa darbiga. Sida ku cad habka, waxaa jira laba nooc: fasaxa oo la rakibo iyo derbiga oo la dhejiyo. Ku rakibo dabka ka-hortagga, dab-bakhtiiye, biiyaha dabka, waalka iwm sida ku xusan shuruudaha macaamiisha. Marka armaajooyinka la sameeyo, goynta laser sare iyo teknoolojiyada alxanka otomaatiga ah ayaa loo isticmaalaa si loo hubiyo tayada wax soo saarka wanaagsan. Gudaha iyo dibedda golaha wasiirrada labaduba waa la rinjiyeeyay, waxtarna ...
BS336 hal adabtarada
Faahfaahin: adabtarada keliya waa nooca adabtarada nooca gacanta lagu qaato. Adapters-ka waxaa sameeya naxaas iyo aluminium soo saaray si ay ugu hoggaansamaan heerka BS 336: 2010. Adapters-ka waxaa lagu kala saaraa cadaadis hooseeya waxayna ku habboon yihiin in loo isticmaalo cadaadiska magaca laga soo galo illaa iyo 16 baararka. Dhameystirka shubista gudaha ee qalabkasta waa mid tayo sare leh oo hubinaya xadidaad socodka qulqulaya oo buuxiya shuruudaha tijaabada socodka socodka.
Isku xidhka tubada Storz
Tilmaamida: Isku xidhka tuubada Storz waxaa loo isticmaalaa dabka dab-demiska ee adeega bixinta biyo-bixinta meelaha gudaha ee markabka Markab isku xidha tuubada ayaa loo qaybiyaa laba qaybood Mid baa ku xidhan waalka, iyo mid ku xidhan nozzles.Marka la isticmaalayo, fur waalka oo ku wareeji biyaha mashiinka si aad u damiso dabka Dhammaan isku-xidhka Jarmalka ee 'STORZ' waa la been abuuray, oo leh muuqaal siman iyo xoog silig ah. In habka wax soo saarka, waxaan si adag u raacaan heerarka badda ee processing iyo testin ...
2 dariiqa marinka breeching
Sharaxaad: Gawaarida Gawaarida waxaa lagu rakibay banaanka dhismaha ama meel kasta oo si fudud looga gali karo oo ku yaal dhismaha ujeeddooyin dab-damis ah shaqaalaha dab-demiska si ay u galaan marinka. Meelaha la soo gaabiyo waxay kuxiran yihiin iskuxirka marinka ee heerka helitaanka guutada dabka iyo iskuxirka marinka meelaha la cayimay. Caadi ahaan way qalalan tahay laakiin waxaa lagu soo dallaci karaa biyo iyadoo laga soo tuurayo qalabka adeegga dabka. Muhiimka ah Specificatoins: ● Waxyaabaha: Birta loo tuuray / Birta Dutile ● Soo gashiga: 2.5 ”BS isla markiiba lab ...